दशैँमा होमवर्क आतंक की सिकाइका कुरा ! | EduKhabar
दशैँमा स्कुलको होमवर्क नगर्ने गाउँमा के के पाइन्छ लेखेर ल्याउने, के के खानेकुरा खाइयो भनेर लेखेर ल्याउने, लेख्न मन नलागे पनि आएर भन्ने । के के गरियो ? कसरी गइयो ? के भयो ? सबैकुरा भन्ने, सबै साथीहरूको सुन्ने तर होमवर्कको कापी बोकेर नजाने भन्नु परो म्याडमलाई - मैले थपे ।
चिसो ल्याएर दिनुहुन्छ अनि के गर्ने त ? - उनको जवाफ थियो ।
मैले चिसो पानी खान्न भन्ने । भोलि विहान पुर्याउन जाँदा भन्दिन्छु नि त - मैले भने ।
हरेक मुलुकका आ-आफ्नै फरक पद्धति होलान् । मैले अभिभावकहरु आफ्ना बच्चाहरु निजी विद्यालय पठाउँछन् भनेर सोधे ? ती शिक्षिकाले भने अनुसार - सरकारी विद्यालयमा कक्षामा धेरै विद्यार्थी हुन्छन् अनि निजीमा बढीमा २५ जना मात्र राखिन्छ ।
प्रकाशित मिति २०७५ आश्विन ३१ ,बुधबार